Fritzing: Yemahara Magetsi Dhizaini Chishandiso | Kubva kuLinux
Fritzing chirongwa che automation mu yemahara yemagetsi dhizaini iyo inotsvaga kubatsira vagadziri uye maartist kutama kubva kumatanho (kushandisa, semuenzaniso, mabhodhi echingwa) kune zvigadzirwa zvekupedzisira.
Fritzing ndeye yemahara software chirongwa chekutsigira vagadziri, maartist, vaongorori, uye hobbyists kuti vashande zvine hungwaru neanopindirana emagetsi.
Chaizvoizvo ndeye zvemagetsi dhizaini yekushandisa ine inesimba interface. Iyo software ine webhusaiti mune iyo nharaunda huru inosanganisirwa nechinangwa chekugovana zviitiko uye kukurudzira kutora chikamu kwema novices uye nyanzvi kutenderera pasirese yemagetsi.
Kugadzirwa kwechishandiso ichi kunotendera vashandisi kunyora zvinyorwa zvavo, kugovana navo vamwe, kudzidzisa zvemagetsi mukirasi, uye kugadzira dhizaini yehunyanzvi hwePBB yekugadzira, muchidimbu kubva pakutanga kusvika mukugadzira.
Kana iwe uri mudzidzi wemagetsi, nyanzvi, kana kungoita wedunhu dhizaini inosheedzera kutarisisa kwako, ichi chishandiso chekuvandudza mapurojekiti ako uye ugovagovana nenyika.
2 Kutanga Fritzing
Iyo yekumisikidza maitiro haina kuomesesa kana sarudzo yako iri rakamanikidzwa faira yakananga kubva kune yepamutemo webhusaiti.
Matanho ekumisikidza iyo faira muLinux, chengetedza munzvimbo inonyanya kukosha pane rako hard drive.
Dhawunirodha iyo faira zvichienderana nekuvakwa kwako (32 kana 64 bits).
Inotanga mvumo yekuuraya pane iyo faira.
chmod a + x faira
Unzip iyo Fritzing folda uye wapedza.
Mune iyo koni isu hatiise mufolda uye tinyore unotevera kuraira.
tar jvxf faira.tar.bz2
Vashandisi veFedora vanogona kuisa Fritzing, nemirairo inotevera.
yum kuisa fritzing
Uye voila, yatove kuiswa.
Vashandisi veDebian vanogona kuitora kubva kune yekuyedza repository.
Maitiro ekubatanidza ekuedza ekuchengetedza kune edu faira «zvinyorwa.list».
Chinhu chekutanga kuita kuvhura terminal uye kugadzirisa zvinyorwa.list faira inowanikwa mu / etc / apt kwavari isu tinonyora:
Vhura iyo faira wedzera mitsara inotevera kumagumo:
# # Debian Unstable (sid)
deb http://ftp.it.debian.org/debian/ isina kugadzikana main don isiri-yemahara
dh-src http://ftp.it.debian.org/debian/ isina kugadzikana main don isiri-yemahara
Sevha shanduko uye kana nhanho dzapfuura dzaitwa, gadziridza runyorwa rwezvakachengetedzwa:
~ $ sudo apt-tora kugadzirisa
Uye pakupedzisira, isa Fritzing:
~ $ sudo apt-tora kuisa fritzing
PaLinux: Tinya kaviri paFritzing kana ./Fritzing pamutsetse wekuraira (wakamisikidzwa mufaira).
PaWindows: tinya kaviri fritzing.exe
PaMac: tinya kaviri iyo Fritzing application
Ongorora: iyi bhaisinari vhezheni yakavakwa uye kuyedzwa paUbuntu LTS 10.04. Ivo vanoshandisa mamwe ma distros vanogona kutsvaga iyo Forum kuti uwane mamwe mashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Fritzing: yemahara emagetsi dhizaini turu
Ndakanga ndazviona mune yemahara Hardware hurukuro naArduino, zvakanaka kwazvo, zvakandibatsira kuti ndiite yangu yemagetsi chirongwa. 🙂
Xexu ortiz akadaro
Ndatenda! Ndakanga ndatsvaga chimwe cheizvi kwemazuva mashoma!
Pindura Xexu Ortiz
Luis M. HDez Rrez. akadaro
Zvinonzwika sezvakanaka sezvo zvirongwa zveiyo edition ye fedora spins maelectiniki anga aine rudzi rwekusanzwisisika uye ini handisi shamwari ne dsmdre iyo ye spice protocol
Pindura kuna Luis M. Hdez Rrez.
Inonakidza kwazvo! Kutenda nekugovana!
Jaime Yepes akadaro
Zvakanakisa, ndizvo zvandaitsvaga
Pindura Jaime Yepes
Zvakanakisa, ini ndanga ndisingamuzive. Ndakamboshandisa Oregano, asi kwete iyi.
Ngatione kuti sei.
Pindura kune hunyengeri
heberth ardila akadaro
zvinonakidza kwazvo ……
Pindura kuna heberth ardila